Latsabato ‘Fitsipaham-pitokisana’ Nohamafisin’ny Fitsaràna ao Goiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Febroary 2019 4:58 GMT
Sainam-pirenena Goiana. sary an'ny Clear Communication People, CC BY-NC-ND 2.0.
Na eo aza ny fandàvana ara-pitsaràna ny vokatra tsy nampoizina tamin'ny latsabato fitsipaham-pitokisana ny 21 desambra 2018, nataon'ny governemanta Goiana, voatazona ny hetsika an'ny antoko mpanohitra.
Rehefa namakivaky ny efitrano i Charandass Persaud, mpikambana iray tao amin'ny parlemanta niaraka tamin'ny Alliance for Change (AFC) (iray amin'ireo antoko politika izay mandrafitra ny fiaraha-mitantana), ary nandatsa-bato ho an'ny fitsipaham-pitokisana, adihevitra iray no nivoaka manodidina izay ho entin'izany. Na izany aza, tamin'ny 31 Janoary 2019 teo, ny Lehiben'ny Fitsarana ao amin'ny firenena, mpisolovava voalohany, Roxane George-Wiltshire, nandidy hoe satria manome ny ampahany maro an'isa amin'ireo 65 mpikambana ao amin'ny Antenimieram-pirenena ao Goiàna ny latsabato 33, dia azo ekena ny latsabato nataon'i Persaud.
33 sy 32 ireo vokatry ny latsabato, ary nanantena ny hanafoana azy ireo ny governemanta tamin'ny alalan'ny fanohanana hevitra hoe tokony ho 34 ny isam-bato notratrarina.
Vakio: Latsabato fitsipaham-pitokisana iray mitondra ny politika ao Goiàna ho amin'ny tany tsy fantatra.(teny anglisy)
Nilaza ihany koa ny filohan'ny Fitsarana fa ilay latsabato dia tokony hiteraka avy hatrany ny fialan'ny filoham-pirenena sy ny kabinetram-pirenena, nefa fitantanan'ny Filoha David Granger mbola manana roa taona tavela.
Tamin'ny fandàvana hilefitra manoloana ireo fangatahan'ny mpanohitra mitaky an'i Granger mba hiala tsy misy hatak'andro, nanambara ny governemanta fa hanaraka ny voalazan'ireo didy ao anaty lalàm-panorenan'i Goiàna izy, izay mandidy fa tokony hatao hatramin'ny volana Martsa 2019 ireo fifidianana ny ho filoham-pirenena vaovao.
Tranga mahaliana, nisy ireo fanangonan-tsonia hafa nanohitra ny vokatr'ilay fitsipaham-pitokisana, izay mpamboly iray no iray tamin'ireo nanao izany, Compton Reid, izay nametraka fanontaniana momba ny maha-ara-dalàna ny latsabato nataon'i Persaud, niainga tamin'ny hoe manana zom-pirenena roa miaraka amin'i Kanadà izy. Nolavin'ny filohan'ny fitsarana ihany koa io tohan-kevitra io.
Na dia nikasa ny hanao fandravàna didy aza ny governemanta, nilaza i Bharrat Jagdeo, mpitarika ny mpanohitra, fa tsy holeferin'ny antokony ny “fanaovana amboletra ara-pitsaràna handrodanana izay efa vita tao amin'ny parlemanta”.
Ankehitriny, nohamafisin'ny tribonaly ny maha-azo raisina vahaolan'ny fitsipaham-pitokisana, mitodika any amin'ny Kaomisiona mpanomana ny Fifidianana ao Guyana ny fifantohan-tsaina satria izy no hikarakarana ny fampitaovana sy fitantanana mifandraika amin'ny fanomanana fifidianana ankapobeny hatao faran'izay haingana.
4 andro izayTrinite sy Tobago
6 andro izaySuriname